आउनुस्, अब यस्ता भाष्य भत्काऔं जिल्लाको कार्यक्रममा भाग लिँदा अगाडि र पछाडि गाडीका लस्कर कुदाउने। अलि अलि भएका खाल्डाखुल्डी एक दुई दिन अगाडि नेताको प्रोटोकल अनुसारले पुर्न पनि लगाउने, अनि एकाध घण्टापछि त्यही बाटो फर्केर बेलुका अघिल्लै रात सुतेको सुविधासम्पन्न घरमा सुत्न आउने। जिल्लामा अलिकति थप समय बाँकी रह्यो भने चाकडीमा रुचाउने कार्यकर्ताबाट घेरिएर बस्नै पर्यो। आइतबार, वैशाख ५, २०७८
सरकार! तिम्रो राजनीति महिलाको शरीरबाट टाढा राख महिलालाई समान अधिकार दिनुपर्छ पनि भन्ने अनि यस्ता विभिन्न प्रस्तावका बरेमा पनि छलफल गर्ने कतिसम्मको पाखण्डीपन हो यो? महिलाको स्वाधि... सोमबार, फागुन ३, २०७७
किन मलाई यस्तो डर लाग्छ? जब स्मृतिका पानाहरूमा कहीँ कतै कुनै गल्तीका गुञ्जायस भेटिँदैनन् त्यो बेला मेरो डर अझै बढेर जान्छ। सोच्छु,के म आफूले आफैंलाई चिन्न नस... शनिबार, माघ २४, २०७७